Iyo Grim Legends: ikozvino unogona kuiwana pane GOG | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino unogona kuwana akateedzana Iyo Grim Legends pane iyo GOG vhidhiyo mutambo online chitoro, ine vhezheni yayo yekuisa pane edu anodiwa GNU / Linux kugoverwa. Naizvozvo, kana iwe uri muteveri wayo uye wave uchitevera kwenguva yakareba, ikozvino unogona kuitenga mune ino inozivikanwa online chitoro. Uye izvo zvinokonzerwa nebasa rekubatana raArtifex Mundi uye GOG kuitira kuti mitambo mitatu yemavhidhiyo iwanikwe.
Ehe, iwe unogona ikozvino kurodha pasi uye edza Iyo Grim Legends akateedzana, zvese zviri zviviri Iyo Yakasiiwa Bridge, Rwiyo rweRima Swan uye zvakare Iyo Rima Guta Ivo vane yakajeka mifananidzo uye zviitiko maererano nehunyanzvi huripo mavari sezvo iwe uchiona mifananidzo kana triler iwe yaunogona kuwana paYouTube. Aya marudzi emitambo yemavhidhiyo akasiyana, kure neechinyakare, asi kunyanya kufadza nekuda kwechikonzero icho ...
El mushambadzi Artifex Mundi Yakatoburitsa mutambo uyu neLinux rutsigiro, asi ikozvino unogona kuvawana vakwana muGOG. Dai wanga usati waziva pamusoro peiyi nhevedzano yemitambo yemavhidhiyo, inyika inoshamisa yemashiripiti ine zviono zvesango rakatukwa uye kutadza kwedu, iine mamwe magrafiki anokatyamadza akadhirwa neruoko, ayo ane mukana wakanaka wekufunga mhedzisiro yekupedzisira iyo isu unogona kucherechedza vashandisi. Saizvozvo, musaga isu tichafamba kuburikidza nenzvimbo idzi uye isu tichawana akati wandei minigames ayo achatibatsira kugadzirisa chakavanzika chekupedzisira patinenge tichifara.
Kana iwe uchivafarira, unogona kuwana rumwe ruzivo nezve yega yeaya matatu mazita muGrim Legends akateedzana mune izvi zvinongedzo, kwaunogonawo kuvaita kuti vafare. aya mazororo eKisimusi akakodzera. Ndinovimba unoifarira uye unakirwe navo:
Grim Legends: Mwenga Akasiiwa
Grim Legends 2: Rwiyo rweRima Swan
Grim Legends 3: Guta Rima
Saka ikozvino unogona kutora kufamba kuburikidza chitoro chaicho uye kana uchivada ... ndevako!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Iyo Grim Legends: ikozvino unogona kuiwana pane GOG
existentialist kusahadzika: sei vasina kutaura kuti i "poindi-uye-baya"? Ini ndinofunga ndichave wekutanga kuziva kuti ndeyemuno, ndiri kutarisira chaizvo kuyedza